Izimila | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Izithombe zezitshalo - ujabulele imvelo ngocingo
Amakhasi amaningi mayelana nezitshalo
Izithombe zezitshalo zomdabu
Izimila, izihlahla, utshani nezihlahla - zonke ziyingxenye yemvelo yethu enhle. Kubantu abaningi, kubonisa ubuhle futhi kudala imvelo ekhululekile, ngisho nokuphila okubucayi kwansuku zonke kwe-21. Century.
Izimila - Izinhlangothi ezinhle kakhulu zemvelo
Bheka nje amadolobha amakhulu eplanethi yethu. Ngisho naseNew York City, ngezinye izindlela "umama" wemizi emikhulu, kukhona i-oasis enkulu eluhlaza yenhlalakahle njengeCentral Park.
Ukuthi indawo enkulu komunye wemizi ethandwa kakhulu emhlabeni isetshenziselwa i-park enkulu, ngakho-ke akukho sikhala sokwakhiwa kwamahhovisi kanye nezakhiwo, kubonisa ukubaluleka kwezitshalo kanye nemvelo ngokujwayelekile.
Kodwa emuva kusuka eNew York City kuya emadolobheni nasemadolobheni ezweni lakithi. Abantu abaningi banamathele kakhulu engadini kanye nemvelo eluhlaza uma befuna ikhaya noma indlu. Akumangalisi, emva kwakho konke, uzizwa ukhululekile kakhulu phakathi kwendawo yokulima ehluma, ukhululeka futhi ukhohlwe ukukhathazeka kokucindezeleka kokuphila kwansuku zonke.
Izinkathi zonyaka - isimangaliso semvelo
Kodwa hhayi nje kuphela ihlobo kwenza izinhliziyo zethu zishaye ngokushesha. Njalo inkathi inezinzuzo zayo kanye nenhle. Izindwangu nezimvula ebusika zilandela ulwandle oluphuzi, olune-orange nolomvu ekwindla. Uma lezo zinsuku ziphinde zifudumale, amahlumela okuqala ahluma emithini engenamanzi kanti izitshalo zokuqala ziqala ukuvula ubuhle bazo.
Futhi ngisho nasezindongeni zethu ezine, asifuni nje ukwenza ngaphandle kwemvelo ethile. Ukuqala ngezitshalo ezincane ezinamanzi ezitshalo ezingaphezu kwemifino emanzini e-aquarium kuya kwezintende zezindebe eziphakeme, cishe ngamunye wethu unezitshalo njengomhlobiso ekhaya lethu. Ngokuphelele emvelweni, ngisho noma kungumfanekiso owenziwe ngezindlela zokwenza izitshalo, abambalwa bethu abafuna ukukwenza ngaphandle.
Akuyona izehlakalo, izithombe eziningi zokukhumbuza nazo zenziwe ngemvelo enemibalabala. Kodwa ngisho nezithombe ezithobisa kuphela isimo sethu esihle, sinesikhalazo esikhethekile kakhulu futhi asigcini nje ezindlini zethu eziningi. Ikakhulukazi kwizithombe zekhompyutha noma ze-smartphone zezitshalo zethu ezikhangayo nezihlahla zijabule kakhulu ukusebenzisa.
Ngenxa yalesi sizathu, siyajabula ukwethula ukukhetha okuhle kwezithombe zezitshalo ngezansi.
Yiqiniso, izithombe azikwazi ukubuyisela ngokuphelele imvelo yangempela. Uma ufuna ukubona umbukiso omibalabala futhi ohlukahlukene wemvelo yethu ngokugcwele, kufanele nje uhambe emoyeni omusha. Kodwa-ke, izithombe zezitshalo kwisayithi yethu zilungele izinkathi ezibandayo futhi ezinzima futhi zingaletha izinto ezincane ekhaya kubantu abavela edolobheni elikhulu abangahlali emaphandleni.
Uhlelo Oluvumelana Nesixazululi nkinga
I-giant Bear Claw / i-Hercules Shrub - Izimila ezinobuthi
Izitshalo zekhasi lokubala
Izitshalo ezinobuthi ezinganeni
Ambrosia - Izitshalo ezinobuthi
Ukubala izithombe zezitshalo